3d Print kofehy, Petg Filaments, Abs Plastic kofehy - Lanbo
PLA kofehy 2Pj
Mangarahara Spool Of PLA
3d Printer kofehy Black (Orange)
3d Printer kofehy Black (Pink)
3d Printer kofehy Black (Purple)
3d Printer kofehy Black (Red)
3d Printer kofehy Black (White)
3d Printer kofehy (Fluorescent mavo)
3d Printer kofehy (Orange)
3d Printer kofehy (Pink)
3d Printer kofehy (Purple mena)
3d Printer kofehy (Red)
Cixi lanbo fanontam-pirinty fanampiana Co., Ltd.was naorina tamin'ny 2011and Faritany CIXI, Ningbo, Zhejiang,
mankafy mety fitaterana fahafahana miditra sy tsara tarehy tontolo iainana.
Ny orinasa manarona ny 2000square faritra iray metatra sy manana mpiasa 100.
Moa 3D zavatra vita pirinty ny fanahy? Ento anao ...
Maro ny olona mitandrina ny 3D fanontam-pirinty, voalohany indrindra, nahasarika ny zavatra kely tsara tarehy pirinty ny 3D. Ankoatra izany, ny sasany namana no hikarakara ny fanatanterahana ny isan-karazany ohatra ny 3D mpanonta, ary fitaovana fanontam-pirinty 3D no tsirambina amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra. Raha ny marina, fitaovana fanontam-pirinty 3D afaka ...
Fantaro ny zavatra PLA ny 3D pirinty Mater ...
Maro ny mpanjifa sy ny namany hanontany Ahy ianao raha PLA dia plastika? Ity misy marokoroko resaka mikasika ny zava-PLA ankehitriny. PLA dia fanafohezana ny teny anglisy ny polylactic asidra, izay voasoratra toy ny: polylacticacid. Polylactic asidra (PLA) dia tantara biobased sy biodegradable fitaovana vita amin'ny akora hydroéthylamidon nanolo-kevitra ...
Misy fiarovana ao amin'ny 3D pirinty fanononana ...
3D fanontam-pirinty dia mifototra amin'ny teknolojia nomerika modely, mampiasa ny fitaovana bondable toy ny vovo-metaly na plastika mba pirinty ny firafitry ny zavatra sosona ny sosona. Ity dia manana fangatahana teknolojia eo amin'ny sehatry ny firavaka, kiraro, orinasa famolavolana, fanorenana, injeniera sy ny fanorenana, ...